बाहिर अ 'नैतिक स 'म्बन्ध राखेर प्रेम गरेका श्रीमानले जब श्रीमती र प्रेमिकालाई एउटै ओ’छ्या’नमा सु’ताएपछी …. (भिडियो) - Rising Dainik
April 7, 2021 Ramash KunwarLeaveaComment on बाहिर अ ‘नैतिक स ‘म्बन्ध राखेर प्रेम गरेका श्रीमानले जब श्रीमती र प्रेमिकालाई एउटै ओ’छ्या’नमा सु’ताएपछी …. (भिडियो)
काठमान्डौ ,२५ चैत । सुर्खेत निबासी जानकी सरु मगर र दाङ निबासी दिल बहादुर घर्ति मगर बीचमा प्रेम भयो । यस्तो प्रेम जुन अ’बैधानिक भयो किनकी दुवै बिबाहित थिए । जानकी दुई छोरा छोरिकि आमा थिइन् र दिल बहादुर बाल बच्चाका बुबा थिए । उनीहरु आपसमै घरबारे थिए तर उनीहरु बीचमा अ’ नै ति क प्रेम भयो ।
अब नेपालीलाई सजिलै पिआर दिन्छौं -अष्ट्रेलिया
अमेरिकी राजदूत बेरीले दशैंको शुभकामना
स्वास्थ्य मन्त्रालयले भन्यो: १४ जिल्लामा लकडाउन गर्नुपर्छ
April 15, 2021 Ramash Kunwar